Jeneraal Odowaa dhiirigalin mooyee dhaliil nagama mudna | Hadalsame Media
Home Maqaallada Jeneraal Odowaa dhiirigalin mooyee dhaliil nagama mudna
Jeneraal Odowaa dhiirigalin mooyee dhaliil nagama mudna
(Hadalsame) 28 Sebt 2019 – Waxaa 22-kii bishii tagtay Agoosto 2019 loo magacaabay Taliyaha Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS) Jeneral Odowaa Yuusuf Raaghe oo 32 jir ah.
Waxaa maalmahaan igu batay in aan arko dad badan oo duraya ama dood galinaya magacaabidda Odowaa loo magacaabay xilkaas, ayagoo sabab uga dhigaya inuu yahay Sarkaal da’ yar oo aan lahayn waayo-aragnimo ku filan, kuna qaban karo xilkaas.
Hase yeeshee, waxaa jira dad kale oo aan anigu ka mid ahay oo qaba in Jeberaal Odowaa uu leeyahay Aqoon, Waaya-aragnimo shaqo iyo karti uu ku qaban karo xilkaas, xilligeedina la joogo.
Aan aragtida difaaceyga gogoldhig ama hordhac uga dhigee:
Sarkaal waa Taliye ama hoggaamiye looga baahan yahay inuu tusaale u noqdo kuwa uu u talinayo (hogganiyano), gaar ahaan xagga:
3- Haybadda iyo karaamada uu ku kasbaday muuqaaalka il-qadka iyo milicsiga leh ee jirka iyo labiska.
(These three points known as combined values should be achieved through serious selection (in the first place), different training stages and high-quality attitudes).
Xaaladda ka dhalata saddexdaan qodob oo isku dhafan (wada jira) markuu kasbado ayuu mudan yahay in lagu magacaabo SARKAAL leh awood hoggaamin, isla markaana tusaale fiican oo ku dayasho leh u noqon karaa inta ka hooseeysa.
Hase yeeshee, su’aasha mudan in la isweydiiyo ayaa noqoneysa:
“Waa goorma marka si buuxda looga dhabeyn karo ama la sugi karo dhaqangalinta xaaladda aan sida kooban u soo bandhigay ee tilmaanta iyo sifaha u ah qofka qaatay magaca “Sarkaal?”
Jawaabta oo kooban:
1- Waa marka dalku yahay mid dhan walba ka dhisan: Xag Siyaadsadeed, Dhaqaale iyo Nabadgalyo.
2- Awoodihiisu taabagal yihiin.
3- Xaalad nabadeed iyo fursad xulasho ay jirto.
4- Dhismaha ama “Organikada” ciidankuna buuxdo oo aanay jirin sabab kalifeysa in la sameeyo dalacaad deg deg ah si loo buuxiyo xilalka banaan iyo darajada u qoran qabashada xil kasta.
Marka arrimaha Ciidamadeena, gaar ahaan, Xoogga Dalka Soomaaliyeed, laga doodayo ama dhaliilayo waa, in marka hore, la isla fahmaa qodobadaan hoose:
1) Saraakiishi Sare oo lahayd aqoonta iyo waayo-aragnimada Ciidan ee berisamaadkii, midka ugu yar maanta waa 70 (todobaatan) jir da’ ah. Talo mooyee tabar kale ma laha.
2) Tabtii dagaal iyo hubkii ay soo barteen Saraakiishaas oo ay xirfadda gaarkaa u lahayeen midna maanta masraxa dagaalka Soomaaliya kama jiro.
3) In burburkii iyo Dagaalkii Sokeeye si buuxda oo hambo la’aan ah u saameeyay Ciidanka Xoogga Dalka, taasina ay kaliftay in dib-u-dhiskiisa sagxadda (ground zero) laga soo bilaabo.
4) Cidda lala dagaalamayo ma aha Cadaw dibadda ka soo duulay oo xuduudda dalka la isku horfadhiyo, balse waa shacabkii ciidanka loo dababaray inuu difaaco oo fallaagoobay, fikrad khaldan iyo ficil naxariis la’aan ah ku xasuuqaya ummaddooda.
5) Saraakiisha ciidanka, sida joogtada ah, ula nool, ka warqabta, la falgasha xilliga hawlgalka dagaal iyo hawl-maalmeedka caadiga ah, intaba, la fulisa waa Saraakiisha Hoose (Xiddigle, Laba Xiddigle iyo Dhamme), wixii kuwaas ka sareeya doorkoodu waa ammar bixin iyo hubin/kormeer.
Sidaas darteed, waxaan aaminsanahay in Jeneraal Odowaa iyo kuwa la filka ah ee sanooyinkaan dambe, laga soo bilaabo xilligii Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf (2003) ilaa maanta diyaarintooda aad looga hawlgalay, aan xagga da’da iyo aqoonta looga habbooneeyn hoggaaminta iyo dagalgalinta ciidankeena maanta.
Dhanka kale, guusha Ciidanka laguma xaqiijin karo aqoonta iyo awoodda hubka oo kaliya, balse waxaa tixgalin iyo door muhim ah ku leh guusha oo u baahan in fiiro gaar loo yeesho dhisidda iyo kor u qaadidda MORAALKA Ciidanka, ayadoo laga eegayo dhanka xaddiga Mushaharka la siinayo, Quudinta, Xanaanada iyo Daryeelka guud.
Wali ma maqal Ciidan inta goobkiisa degaan loogu tagay geel loo qalay, waxa ay ka mid tahay qaababka ugu sahlan oo Moraalka iyo Niyadda Ciidanka kor loogu qaadi karo. Waa arrin fudud oo Madaxda Qaranka, Ganacsatada iyo Ururada Bulshadu si meerta ah u fulin karaan, isla markaana saameeyn ku yeelaneysa dareenka askarta naftooda u hibeeyay difaaca dadkooda.
Waxaa ila qumanaatay in aan idinla wadaago taariikh nololeedka Jeneraal Odowaa Yuusuf Raage – Taliyaha cusub Xoogga Dalka Soomaaliyeed:
-1987: ayuu ku dhashay magaalada Aadanyabaal . Dugsiga Hoose/Dhexe waxa uu ka dhigtay isla magaaladaas.
-2002-2005: wuxuu Dugsiga Sare ka dhigtay kana qalinjabiyay Xamar.
-2005: wuxuu ku biiray Ciidanka XDS asagoo ka tirsanaa Guutada 54 ilaalada Madaxtooyada Baydhabo, Jowhar iyo Xamar. Waa xilligii Madaxweyne Cabdulaahi Yuusuf oo xaaladdu adkeyd Madaxtooyaduna hadba meel u guureeysay.
-15/07/2007: wuxuu ka mid aha Ciidan hal sano tababar ah loogu diray Dugsiga Tababarka Ciidanka ee Kaweweta dalka Uganda. Isla sanadkaas ayuu qaatay tababar dheeri ah oo Macallinimo.
-2008: Leyli Sarkaalnimo ayuu u galay Dugsiga Tababarka Ciidanka Bihanga ee dalka Uganda, asagoo soo bartay tabta dagaal ilaa heer Urur.
-26/12/2009: Waxa uu qaatay darajada “Xiddigle “. Isla sanadkaas ayuu dalka Ugaanda ku qaatay tababar Abbaanduulka Hoose.
-2010: ayuu dalka dib ugu soo laabtay asagoo tababar 45 cisho ah ku qaatay Dugsiga Jeneraal Kaahiye ee Xamar.
– Sanadihii 2010-11-12: waxa uu door firfircoon ka qaatay dagaaladii lagu xoreynayay Gobolka Banaadir, Shabeelada Dhexe iyo Shabeelada Hoose. Kadibna u dalacay darajada “Laba Xiddigle”.
-2013: wuxuu qaab abaalmarin ugu dalacay darajada “Dhamme”, isla sanadkaas ayuu galay Jaamacadda Difaaca Qaranka Istanbul, asagoo qaatay tababar Ciidanka Lugta ah iyo luqadaha.
-2014: ayuu dalka ku soo noqday. isla sanadkaas ayuu ku laabtay, mar kale, dalka Turkiga asagoo galay Kulliyadda Dagaalka Turkiga. Waxa uu soo bartay Istratejiyada Dagaalka heer Guuto “War strategy at Brigade Commander Level”.
-Luuliyo 2016: ayuu dalka ku soo laabtay. Wuxuna noqday mid ka mid ah Saraakiisha ugu firfircoon XDS, waxaana loo dalacsiiyay darajada “Gaashaanle”.
Isla markaana loo magacaabay Abbaanduulaha Ururka 60-aad Ciidanka ilaalada Madaxtooyada.
-Maarso 2018: Wuxuu noqday Taliyaha Ururka 60-aad Ciidanka ilaalada Madaxtooyada asagoo loo dalacsiiyay darajada “Gaashaanle Dhexe”.
-Agoosto 2018: Asagoo ah Taliye Guuto ayaa loogu daray xilka Abbaanduulaha XDS, loona dalacsiiyay darajada “Sareeye Guuto”.
-Maarso 2019: Waxaa loo magacaabay Taliyaha Ciidanka Dhulka (Ground Force Commander).
-22/08/2019: Waxaa loo magacaabay Taliyaha Xoogga Dalka Soomaaliyeed (XDS).
Sida ka muuqata tixanaha taariikh nololeedkiisa Ciidanka ee kor ku xusan
(2005-2019) Jeneraal Odowaa waxa uu leeyahay 15 sano oo Tababar aqooneed iyo Waaya-aragnimo shaqo ah uu ku qaban karo xilka Taliyaha Xoogga Dalka oo ku jira marxaladdii kobcinta iyo tayeynta dhan walba.
Waxaa kale oo la tijaabiyay in Jananku leeyahay karti, firfircooni iyo geesinimo qofeed oo u sahleysa go’aan qaadasho ku habboon qaabka weerarka iyo ugaarsiga argagixisada dhaqdhaqaaqeedu badan yahay oo aan, sida badan, lahayn aag loogu hagaago.
Odowaa, Jananka da’da yar, waxa uu nooga baahan yahay dhiirigalin iyo in la siiyo waqti lagu qiimeeyn karo waxqabadkiisa. Lamana gaarin waqtigii la dhaliili lahaa, haddii aanay dhaliishu ahayn middii dhaqanka iyo caadada noo ahayd ee dhihideeda afkeenu qabatimay.
“Xilka uu dhawaan u dhaartay
ha loo dhaafo dhowr gu’yaal
asagaa ka soo dhalaali”.
Previous articleDAAWO: Fanaanadda caanka ah ee Naada Al Qalca oo Somalia imanaysa + Sawirro
Next article”Waxaan sii wadaynaa tayaynta & qalabaynta ciidanka” – Dowladda oo diyaarisay ciidan cusub + Sawirro